ဒေသခံတွေအတွက် သတ္ထိရှိရှိ ရင်ဆိုင်ဖို့လိုတဲ့ အပြောင်းအလဲရော ဟုတ်ရဲ့လား (Maung Luu Yay) | MoeMaKa Burmese News & Media
“ … သတ္ထုတွင်းလုပ်ငန်း ဖက်စပ်စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့သတ္ထုတွင်း နည်းဥပဒေများ အခန်း-၁၆၊ နည်းဥပဒေ ၈၄ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ သတ္ထုတွင်းဝန်ကြီးဌာနသည် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ နိုင်ငံတော်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုနှင့် ဓာတ်သတ္ထုရှာဖွေခြင်း၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်း (သို့မဟုတ်) ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖက်စပ်စာချုပ်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ ချုပ်ဆိုနိုင်သည် …”
သို့ကလို နိုင်ငံတော်နှင့်ဦးပိုင်ကြားက စာချုပ်ဟာ တရားမဝင်တော့တဲ့အတွက် အဲဒီတရားမဝင်စာချုပ်အပေါ်မှီပြီး ထပ်ဆင့်ချုပ်ထားတဲ့ ဦးပိုင်နဲ့ ဝမ်ဘောင် စာချုပ်ဟာလဲ “အလိုလိုပျက်ပြယ်ပြီး” ဖြစ်သွားပါတယ်။
“လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီသတ္ထုတွင်း စီမံကိန်းနယ်မြေတွင် သိမ်းဆည်းမြေဧရိယာစုစုပေါင်း (၇၈၆၇ ဒသမ ၇၈ ဧက) အနက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးမြေ (၅၀၅၇ ဒသမ ၀၀ဧက) ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည် …” တဲ့။
“လက်ပံတောင်းတောင် သတ္ထုတွင်းလုပ်သားအင်အားမှာ နိုင်ငံခြားသားပညာရှင် (၁၆၉) ဦးနှင့် မြန်မာဝန်ထမ်း (၆၆၀) ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ အသစ်ခန့်ထားမည့် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရများနှင့် အခြားဘွဲ့ရမြန်မာဝန်ထမ်းများ (၁၂၈) ဦးအား …” တဲ့ဗျာ။
2 Responses to ဒေသခံတွေအတွက် သတ္ထိရှိရှိ ရင်ဆိုင်ဖို့လိုတဲ့ အပြောင်းအလဲရော ဟုတ်ရဲ့လား (Maung Luu Yay)
killer eye on March 20, 2013 at 6:21 pm
ZAW on March 21, 2013 at 7:43 am
In Democracy system, Government and army do not do economic for them. Government takes tax
according to the good civil tax law from population and use and support for population of country.
(Now in Burma, army do economic for them. that is not Democracy way)